Spakka Lotto: software yemahara yekuhwina pa zvakawanda!
Iwe unonyatsoda kuyedza ku kuhwina imwe zvese kumutambo weLotto? Dhawunirodha software iyi yemahara ikozvino ThatsLuck!
Usati waenderera mberi yeuka izvo ThatsLuck iwe unogona zvakare kuwana zvemahara zvemukati, kana iwe uchida kugara uchigadziriswa pane zvinyorwa zvinyorera kuchiteshi chedu pa ► YouTube.
Kumutambo we Lotto Ini ndichave ndakaridza hongu uye kwete kanokwana makumi maviri muhupenyu hwangu, muchokwadi hazvina kumbondikwezva zvakanyanya, pamwe nekuti ndagara ndichifunga kuti kana kutove kurwa nemakumi matatu nenomwe (iwo eRoulette) yaive feat, ndoda kurwisa makumi mapfumbamwe , uyezve haibhadharwe zvakashata, asi zvakaipa kwazvo!
Ok ichi hachisi posvo yekupinda muhunyanzvi ruzivo rwekuti yakawanda sei nyika yeItaly yakaranga vateveri vemutambo uyu wekare kwemazana emakore, zvisinei zvinoratidzwa nemathematics kuti pakati pemasanganiswa akasiyana anowanikwa kumutambi,ambo zvirokwazvo ndechimwe chezvisinganetsi.
Kutanga kubva pachokwadi ichi, ini ndagadzira iyi yakanaka jenareta yezvakakomberedzwa nayo, neniwo handitombozvitenda (uye zvinosuwisa kuti handina kuchengeta humbowo), imwe nguva yapfuura ndakahwina 625 euros, ndichirova zvese zviri zviviri zvakaomarara pavhiri reNaples.
Ini ndinorangarirawo kuti nechikamu chakanaka chemari iyoyo, chakatemerwa imwe varaidzo, ndakazvipa kupera kwevhiki muguta rakanaka reNaples.
Maitiro ekuyedza mhanza yako kuhwina zvese zviri zviviri
Kushandisa Spakka Lotto haudi tsananguro zhinji, ingo: 1. tanga chirongwa, 2. tinya paKutanga bhatani, 3. fambisa iyo yekumhanyisa variator kana uchida uye 4. tinya Stop bhatani.
Spakka Lotto inozotanga zvishoma nezvishoma kudzikira, kusvikira yazomira uye inoratidza iwo manhamba maviri uye vhiri raunogona kuyedza mhanza yako nezvose zviri zviviri.
Pasina mubvunzo kutaura, kana iwe uchinyatsoda kuyedza rombo rako kuhwina zvese pamutambo we Lotto Ndinokurudzira kuti iwe ugare uchigovera zvine basa chaizvo zvidiki muhurongwa hwe2 / 3 euros pamutambo, mutambo we Lotto, kana ichinyatsokufadza, inofanirwa kuramba iri nguva inonakidza yekupa zvikamu zvemukati zvemukati mukati megore.
Kana iwe uchiri kuda kuzviedza, zvakare nekuti sekutaura kunoita TV kuno kuItari "... ukasatamba haukunde", Spakka Lotto zvirokwazvo zvinokutorera kure nekunyara kwekusarudza nhamba kuti ubike tikiti Lotto saka shamwari, kugehena nemasvomhu uye Rombo Rakanaka!
File Download	Spakkalotto.zip - 1 MB
Kategori Lotti Chisungo navigation